[I-COCO Apartment-Giant Screen Projectionionioning] I-100-intshi enkulu yescreen esiboniswayo, ukukhanya okunethezeka kunye nendawo yokuhlala yabucala ekwisiXeko sase-Agile, izibini ezithandanayo ziqokelelana kunye nokupheka, imiboniso bhanyabhanya. - I-Airbnb
[I-COCO Apartment-Giant Screen Projectionionioning] I-100-intshi enkulu yescreen esiboniswayo, ukukhanya okunethezeka kunye nendawo yokuhlala yabucala ekwisiXeko sase-Agile, izibini ezithandanayo ziqokelelana kunye nokupheka, imiboniso bhanyabhanya.
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguCoco
[Intshayelelo yendlu] Igumbi lokuqala likaZhaoqing elinomxholo wobunewunewu obulula kunye nezibini ezithandanayo, waphinda waphinda waphonononga iLoft enemigangatho emibini, amagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlala elinye kunye negumbi lokuhlambela elinye, ukucwangciswa kobunewunewu obulula, indibaniselwano yomgubo wegolide kunye nomgubo ongwevu, ukunika. unamava amatsha.
I-100-intshi enkulu yokubonisa isikrini, ubulungu be-Tencent Cloud Aurora buvuliwe, inani elikhulu le-blockbusters, uchungechunge oludumileyo lweTV lulindele ukuba ulandele.
Awudingi ukulinda ubusuku ukuze ubone iinkwenkwezi, unokubona iinkwenkwezi ngexesha lasemini. Amakhethini eenkwenkwezi ezibomvu, elinde ukuba uzive uthando lweSizukulwana samantombazana.
Igcwele uthando, izibini ze-1314 zinepeyi yeglasi. Masikwenzele isiselo esiswiti.
King ubukhulu 1.8 ukumkani ubungakanani ibhedi, 20 cm seahorse umatrasi, egcwele bhetyebhetye kunye nentuthuzelo. Igumbi elincinci lilungiselelwe njengendawo yokuphumla yokuphumla, apho unokonwabela ixesha lokutya kwabantu ababini, okanye indawo eyahlukileyo yomhla.Indlu encinci yothando igcwele, ukhetho olungcono kakhulu kwizibini ezitshatileyo. Kukho i-fixed-frequency air-conditioning ene-heater kunye nokupholisa, epholile kakhulu ehlotyeni kwaye ishushu ebusika.Inenkonzo yamanzi ashushu ubusuku nemini.Kukho umatshini wokuhlamba kwaye kulula kakhulu ukuhlamba impahla.
[Indawo ephambili yabakhenkethi] imizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ukuya kwisango elingasempuma le-Qixingyan, indawo ebukekayo yesizwe ye-5A, apho unokubona iipikoko, zibhadula phakathi kweentaba nemilambo, ziyonwatyiswa kubuhle bendalo, bulela amanqaku emibongo eqingqwe ngamatye ashiyekileyo. yi imbali, kwaye bahlole nemiqolomba umdla engaqhelekanga. Imizuzu engama-30 ukuya kwiNtaba yaseDinghu, iNdalo yeNdalo yeHlabathi. Kuthatha malunga nemizuzu emi-3 ukuya kwemi-5 ukuqhuba ukuya kwiLake laseFairy kwiPaki yeSizwe yoMgxobhozo ukubona iikhreyini ezinezithsaba ezibomvu neeflamingo kunye nombono omangalisayo wamawakawaka eentaka ezibuyela ekhaya. Ngqina ummangaliso wokuNceda kukaBuddha kunye noHandan. Unokukusa kwiSiqithi saseTaohua, isango elingasentla leQixingyan, ukuze ubone imithi evuthulukayo, emva koko uqalise ukudubula iqela leebloko, elingenakulibaleka ubomi bonke.
Ifakwe kumbindi wesixeko, iChengdong CDB isithili seshishini esingundoqo, isithili seshishini saseYihua Plaza, isithili seshishini saseNixie Plaza, iDongmen Plaza kunye nesithili soshishino saseDonghu, njl.